Sidee Lacag Loogu Sameeyaa ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee Cryptocurrencies? | vfxAlert official blog
Xeeladaha farsamada ee cryptocurrencies
Bitcoin iyo Ethereum waxay sii wadaan inay ku koraan sicirka, iyagoo siinaya fursad dakhli mala-awaal ah iyo dakhli dadban ee maalgashiyada muddada-dheer. Haddii aad tahay ganacsade markaa sidee lacag loogu kasbadaa ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee cryptocurrencies. Waa maxay xeeladaha ay tahay inaad isticmaasho? Jawaab: lacag ka samee tilmaamayaasha la xaqiijiyay iyo xeeladaha falanqaynta farsamada.
Nooca : Isbedelka
Wakhtiga : Mid kasta oo ka mid ah xadka M1-M5. Xaaladeena, M1 ayaa la adeegsadaa, laakiin iyada oo ay sii kordhayso falanqaynta, saxnaanta signalada ayaa sii kordheysa.
Hantida ganacsiga : Wax kasta oo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah calaamadaha ganacsiga . Shuruudda ugu weyni waa mid go'an (2-3 dhibcood) oo aan lahayn khidmado qarsoon.
#1. Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa ee Bitcoin .
Waxaan ku bilownaa tilmaamayaasha isbeddelka. Kuwa ugu badan "classic" waxay noqon doonaan Celceliska Guuritaanka. Istaraatiijiyaddu waxay fursadaha ka furaysaa isgoyska Celceliska. Ganacsatada qibrada leh waxay ka ganacsan karaan gunooyinka. Calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ayaa kaliya ku jira isbeddelka, kuma ganacsanayno guriga !
Istaraatiijiyadu waxay isticmaashaa laba qaybood oo celcelis guuritaan ah :
Laba celcelis jibbaar (EMA) oo leh xilliyo 18 iyo 28 . Go'aami jihada isbeddelka muddada dhexe. On biibiilaha ee kacsanaanta sare waxaa loo isticmaali karaa kanaalka qiimaha, gudaha kaas oo aad ku ganacsan karto (width aan ka yarayn 10-15 dhibcood). Burburka wuxuu noqon doonaa calaamad laba -geesood ah oo isbeddel cusub ah. Habkan waxaa lagula talinayaa kaliya ganacsatada khibrada leh !
Celceliska miisaanka (WMA) oo leh waqtiyo 5 iyo 8 . Qiimee xoogga, jihada isbeddellada “deg -degga ah” oo muuji dhibicda furitaanka/xiritaanka xulashooyinka. Celceliska Dhaqdhaqaaqa ee Miisaanka leh, qiimayaashii ugu dambeeyay ayaa leh culeyska ugu weyn, sidaa darteed falcelinta isbeddelladooda ayaa dhakhso badan !
UP (WAC) - doorasho . Celceliska Dhaqdhaqaaqa “dhaqsaha leh” wuxuu ka gudbaa “gaabis” kor ilaa hoos ama wuxuu ka dhaqaajiyaa hoosta EMA;
DOWN (PUT) - doorasho . Xaaladaha dib u noqoshada: WMA waxay ka sarraysaa EMA ama ka gudubtaa xagga hoose.
Haddii dhammaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ay isu dhow yihiin, markaa tani waxay muujinaysaa isbeddel isbeddel ah. Waxaan joognaa bannaanka suuqa crypto oo waxaan sugeynaa calaamadda xigta .
#2. Oscillator -ka Ethereum .
Ma jiraan wax dhaqdhaqaaqyo mala -awaal ah oo ku saabsan Ethereum, isbeddellada ayaa la saadaalin karaa xitaa waqtiyada hoose. Kaliya oscillators -ka xad -dhaafka ah/xad -dhaafka ah ayaa la isticmaali karaa, laakiin waxaa lagu talinayaa in lagu xaqiijiyo tilmaamayaasha isbeddelka ama calaamadaha crypto . Ka -guuritaanka Celceliska istaraatijiyaddii hore ayaa samayn doonta.
Laba oscillators :
Stochastic oo leh muddo 5 . Oscillator -ka ayaa qiimeyn doona dheelitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: saadaasha oo ka sarreysa heerka 80 - dhammaadka kor -u -kaca (xad -dhaafka ah), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos -u -dhaca (xad -dhaafka). Oscillator “Degdeg” leh oo leh astaantii ugu horreysay ee isbeddelka isbeddelka iyo ikhtiyaarka cusub ee crypto.
Xilliga 21 wuxuu xaqiijinayaa ishaarooyinka ka imanaya “dhakhso” Stochastic.